Salar de Uyuni၊ ဘိုလီးဗီးယားရှိကောင်းကင်ရှုခင်း။ | ခရီးသွားသတင်း
Salar de Uyuni၊ ဘိုလီးဗီးယားရှိကောင်းကင်ရှုခင်း
Mariela Carril | | ဘိုလီးဗီးယား, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
တောင်အမေရိက ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာတစ်ခု၊ နှစ်တစ်ထောင်သမိုင်းနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုခင်းများရှိသောတိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ ဥရောပမျက်စိအတွက်, တွင်လည်းထူးခြားဆန်းပြား၏ခွဲတမ်းပါရှိသည်။ အမေဇုံ၊ ပီရူးနှင့်၎င်း၏အပျက်အယွင်းများ၊ အီကွေဒေါနှင့်တောင်တန်းများ၊ အာဂျင်တီးနားနှင့်၎င်း၏ရေခဲမြစ်များ o ဘိုလီးဗီးယား နှင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြရာအကြား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အံ့ဖွယ်အ Salar က de Uyuni.
ဒီလစာ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးဆားကန္တာရဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘိုလီးဗီးယားတွင်ကြီးမားပြီးကြီးမားသောလီသီယမ်သည်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၏ဘက်ထရီများတွင်အရာအားလုံးကိုပတ်ပတ်လည်လည်ပတ်သည်၊ နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်း၏မျက်လုံးတွင်လည်းရှိသည်။ ဒါကိုသိရအောင်။
2 Uyuni ဆားအိမ်
3 အဆိုပါ Salar က de Uyuni သွားရောက်ကြည့်ရှု
ဗိုလဗီဗီးယားနိုင်ငံ၏အများကိန်း မြို့တော် Sucre အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ဥပဒေပြုရေးအာဏာ၏နေရာသည်အခြားအရေးပါသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ la Paz။ အာဂျင်တီးနား၊ ပါရာဂွေး၊ ဘရာဇီး၊ ချီလီနှင့်ပီရူးနိုင်ငံများနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးရွေးကောက်ပွဲ၏ရလဒ်များကိုအသိအမှတ်မပြုသောကြောင့်အာဏာသိမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုသင်နောက်ဆုံးရသတင်းများကြားခဲ့ရသည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာသမ္မတနှင့်တိုင်းပြည်၏ကြီးမားသောအသွင်ပြောင်းလဲခဲ့သည် Evo Morales.
ဘိုလီးဗီးယား အများအပြားရှေးဟောင်းသုတေသနဘဏ္treာတိုက်ရှိပါတယ်ထောင်နှင့်ချီသော မင်္ဂလာပါဥပမာအားဖြင့်, ဒါမှမဟုတ် Samaipatရန် အများစုမှာအင်ဒီးစ်တွင်ရှိပြီးအချို့မှာမူပိုမိုကောင်းမွန်သောသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနယ်မြေတွင်ရှိကြသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်တစ်ချိန်ကယဉ်ကျေးမှုအတွက်အလွန်တက်ကြွပြီးအရေးပါသောဒေသတစ်ခုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားပြောကြသည်။
ယင်း၏ရှေးဟောင်းသုတေသနဘဏ္treာငွေများရှိသော်လည်းကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးသဘာဝရှုခင်းများဖြစ်သောကြီးမားသည့် Salar de Uyuni သို့သွားရောက်ရန်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံနိုင်ပါ။ ကျနော်တို့တင်ဆက်မှုတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးသဲကန္တာရဖြစ်သည်။
Uyuni ဆားအိမ် မျက်နှာပြင်အကျယ် ၁၀၅၈၂ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိပြီးအမြင့် ၃၆၅၀ မီတာရှိသည် တိုင်းပြည်၏အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသ၊ ဒန်နီယယ်လ်ကမ်ပိုစ် (Potosí) ဌာနတွင်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းလေးသောင်းခန့်ကဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ၏နယ်မြေတွင်မင်းချင့်မင်းနှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၁၀၀၀ ခန့်ကတူးကာရေကန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်ရာသီဥတုမှာခြောက်သွေ့ခြောက်သွေ့။ မတူဘဲကွဲပြားခြားနားပြီးအမြဲတမ်းမိုးရွာသည်။
ထိုအခါတစ် ဦး ရှိပါလိမ့်မယ် ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုကြောင့်အင်ဒီးအိုင်ကြီးများကျုံ့သွားသည် ထိုကဲ့သို့သော Uyuni သို့မဟုတ် Coipasa အဖြစ်ဆားတိုက်ခန်းဖွဲ့စည်းခြင်းမှမြင့်တက်ပေးခြင်း။ ထိုရေကန်များသည်ဆားခတ်များသို့မဟုတ်သေးငယ်သောဂူများဖြစ်လာပြီးလက်ရှိရေကန် Uru Uru သို့မဟုတ်Poopóကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Uyuni ဆားတိုက်ခန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ မေးခွန်းကောင်း။ အချို့ခန့်မှန်းကြသည် တန်ချိန် ၁၀၀၀၀ မီလီယံခန့်ရှိသည်။ တစ်မီတာမှဆယ်မီတာအကြားကွဲပြားခြားနားသောအထူရှိသောဆားအလွှာ ၁၁ ခုခန့်ရှိသည်။ အပေါ်ယံလွှာသည် ၁၀ မီတာရှည်သည်။ ဆားပြား၏စုစုပေါင်းအနက်မှာမီတာ ၁၂၀ ခန့်ရှိသည်ဆားရည်အိုင်နှင့်ရွှံ့အလွှာအကြား။
00 နှစ်စဉ်တန်ချိန် ၂၅၀၀၀ ခန့်ကိုထုတ်ယူသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီမှာအထက်တွင်ပြောသည်အဖြစ် တစ်နေ့အရေးပါအရာသည်ဆားသိပ်သည်းဆမဟုတ်ဘဲလီသီယမ်ဖြစ်သည်။ မက်ဒီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ ဆိုဒီယမ်နှင့်ဘိုရွန်ဆာလဖိတ်များနှင့်အတူဤနေရာတွင်ဆားရည်အိုင်တွင်တွေ့နိုင်သောလီသီယမ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအားလုံးတွင်အသုံးပြုသောဘက်ထရီများ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့သယံဇာတများမှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ အကြံဥာဏ်လား ဘိုလီးဗီးယားအဖြစ်အပျက်များသတင်းကိုဤသော့တွင်ဖတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်ကဘိုလီးဗီးယားတွင်ရှိသည်ဟုယူမှတ်သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Lithium ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးကိုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသောဤအချက်ကိုသူတို့ထင်ဟပ်နေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသော site နှင့် ပါတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဆက်လက်လေ့လာသည်။ ခရီးသွား ဦး တည်ရာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့? ကောင်းပြီ၊ ဒီ post ကိုအလှဆင်သည့်မည်သည့်ဓာတ်ပုံမဆိုကောင်းမွန်သောသက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ နောက်ခံအဖြူ၊ ကောင်းကင်ပြာ၊ အကောင်းဆုံးပုံများ
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အလစာလည်းဖြစ်ပါတယ် အမေရိကန် Flamingo သုံးနံ့သာမျိုးဂျိမ်းစ်နှင့်ချီလီလူမျိုးတို့၏အင်ဒီးယန်းဖလင်ကို၊ ဒီတော့အရာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်လိုက်ပြီးအဲဒါကို ဦး တည်ရာအဖြစ်သံလိုက်ဝါဒများစွာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တယ်။ က) ဟုတ်တယ်၊ တစ်နှစ်လျှင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၃၀၀၀၀၀ ခန့်ရှိသည် နှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်, 2019, သူအဖြစ်ကမ္ဘာ့ခရီးသွားဆုပေးအနိုင်ရရှိခဲ့သည် တောင်အမေရိကရှိအကောင်းဆုံးခရီးသွား At ည့်ဆွဲဆောင်.
အဆိုပါ Salar က de Uyuni သွားရောက်ကြည့်ရှု
ဘယ်အချိန်သွားရမယ့်နှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်လဲ။ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖလင်မန်းများကိုအပြည့်အ ၀ မွေးမြူခြင်းဖြင့်ကောင်းမွန်သောဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးနိုင်သည်။ အရာရာတိုင်း၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများရှိသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်မည်သည့်အခိုက်အတန့်သည်ကောင်း၏။
ရာသီနှစ်ခုရှိတယ်၊ မိုးရာသီရှိတယ် သောဒီဇင်ဘာလမှမတ်လတောင်အမေရိက၏နွေရာသီ၌ရှိ၏ ပြီးနောက် ခြောက်သွေ့ရာသီ ရသောမေလနှင့်အောက်တိုဘာလ, ဆောင်းရာသီအကြားဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ဆားငန်ရေသည်မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စုဆောင်းပြီးသောအခါဖြစ်လိမ့်မည် အံ့သြဖွယ်mirrorရာမမှန် ကြောင်းမိုthe်းကောင်းကင်နှင့်အတူပေါင်းစည်းပုံရသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်မှန်သည်မဖြစ်ပေါ်သော်လည်းရာသီဥတုပိုကောင်းသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အာဂျင်တီးနားမြောက်ဘက်တွင်နေထိုင်ပါကသို့မဟုတ်ထိုတွင်နေထိုင်ပါကအလည်အပတ်ရောက်ရှိရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အမှန်မှာမြောက်ဘက်မှအာဂျင်တီးနားများစွာသည်သူတို့၏ဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်၎င်းကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်Tucumán, Jujuy သို့မဟုတ် Salta ကဲ့သို့သောပြည်နယ်များမှကားဖြင့်သွားသောခရီးကိုဆိုလိုသည်။ သင်ဘိုလီးဗီးယားသို့အခြားအရာများသို့လည်ပတ်လျှင်၎င်းသည်လည်းအလွယ်တကူသွားနိုင်သည်။ လေ့လာရေးခရီးအများကြီးရှိပါတယ် များစွာသောလူတွေကသူတို့ဘာသာသူတို့သွားကြပေမဲ့၊ သင်ဟာဝေးလံခေါင်သီတဲ့နေရာမှလာလျှင်တစ်နေ့တာခရီးစဉ်ငှားရန်လုံခြုံသည်။
သင်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်ကိုသင်မသိပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကားထဲတွင်နိမိတ်ပြညွှန်ပြမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အချိန်မရှိရင်နေ့ခရီးတွေရှိတယ် သို့မဟုတ်သုံးရက်အထိ အနီးအနားရှိဂူများ၊ ရေပူစမ်းများသို့မဟုတ်ရေပူပန်းများသို့လည်ပတ်ရန်။ သင်၏ကျောပိုးအိတ်တွင်မပျောက်ဆုံးနိုင်သည့်အရာမှာနေလောင်ခြင်း၊ နေကာမျက်မှန်၊ ဦး ထုပ်၊ ရေ၊ ရေချိုးခန်းသို့သွားရန်ခရီးများ၊
သင်အာဂျင်တီးနားတွင်ရောက်နေပါကဖြတ်ကူးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်းကို La Quiaca တွင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်, Jujuy ပြည်နယ်၊ ဘိုလီးဗီးယားရှိVillazónသို့ ဦး တည်သည်။ ထိုနေရာတွင်သင်သည်ရထားစီး။ ကိုးနာရီအကြာတွင်သင်သွားလိုသောခရီးသို့ရောက်သည်။ သို့မဟုတ်သင်ဘတ်စ်ကားစီး။ လမ်းကြောင်း၏အခြေအနေဆိုးကိုသည်းခံနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားနိုင်ငံမှလာလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် လာပါ့ဇ်သို့လေယာဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိ နေ့တိုင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်များသို့မဟုတ် ၁၀ နာရီခန့်ကြာမြင့်သောကားတစ်စီးငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ် Oruro သို့ရထားနှင့်ထိုရထားမှ Uyuni သို့သွားသောခရီးသွား night ည့်သည်များအတွက်ညဥ့်နက်သည့်ဘတ်စ်ကားများလည်းရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » ဘိုလီးဗီးယား » Salar de Uyuni၊ ဘိုလီးဗီးယားရှိကောင်းကင်ရှုခင်း
အဘယ်အရာကို Catania အတွက်ကြည့်ရှုပါ
အဘယ်အရာကို Medinaceli အတွက်ကြည့်ရှုပါ